Ivermectin, 1% + 10% Closantel duritaanka - Shiinaha Chongqing Fangtong
600mg bolusdose albendazole
Ivermectin .Gogoshaydana 0.2%
Fenbendazole Cayrin Muddo 10%
duro oxytetracycline 20%
duro ivermectin 1%
ivermectin, 1% + 10% Closantel duritaanka
Muuqaalka Waxaa cadaatay oo ah in brownish dareere cad huruud ah. TIRADA ml kasta waxa ku jira: 10mg ivermectin, Closantel: 100mg. Tilmaan, waayo, daaweynta ee trematode isku dhafan (la yaabka lahaa) iyo nematode ama cayayaan ee injirta waxaa sabab u ah caloosha iyo mindhicirka roundworms, lungworms, eyeworms, warbles, caarada iyo injirta oo lo 'ah. roundworms caloosha ostertagi Ostertagia (oo ay ku jiraan marxaladaha larval xanniban tahey), Ostertagia lyrata (dadka waaweyn), Haemonchus placei (dadka waaweyn iyo qaan gaadhin), axei Trichostrongylus (dadka waaweyn iyo ...
Waxaa cadaatay oo ah in brownish dareere cad huruud ah.
ml kasta waxa ku jira: 10mg ivermectin, Closantel: 100mg.
Wixii lagu daaweyn jiray trematode isku dhafan (la yaabka lahaa) iyo nematode ama cayayaan ee injirta waxaa sabab u ah caloosha iyo mindhicirka roundworms, lungworms, eyeworms, warbles, caarada iyo injirta oo lo 'ah.
ostertagi Ostertagia (oo ay ku jiraan marxaladaha larval xanniban tahey), Ostertagia lyrata (dadka waaweyn), placei Haemonchus (dadka waaweyn iyo qaan gaadhin), axei Trichostrongylus (dadka waaweyn iyo qaan gaadhin), colubriformis Trichostrongylus (dadka waaweyn iyo qaan gaadhin), Cooperia oncophora (dadka waaweyn iyo qaan gaadhin), Cooperia punctata ( dadka waaweyn iyo qaan gaadhin), pectinata Cooperia (dadka waaweyn iyo qaan gaadhin), radiatum Oesophagostomum (dadka waaweyn iyo qaan gaadhin), Nematodirus helvetianus (dadka waaweyn), Nematodirus spathiger (dadka waaweyn), Strongyloides papillosus (dadka waaweyn), phlebotomum Bunostomum (dadka waaweyn iyo qaan gaadhin), Toxocara vitulorum ( dadka waaweyn), Trichuris spp.
Dictyocaulus viviparus (dadka waaweyn iyo dirxiga wareega 4aad).
Beerka la yaabka lahaa (trematodes)
Daaweynta la yaabka lahaa ee 12 toddobaad (bisil)> 99% oggolyahay.
Daaweynta la yaabka lahaa ee 9 toddobaad (qaan gaadhin dambe)> 90% oggolyahay.
Eyeworms (dadka waaweyn)
Malabiso Cattle (marxaladaha dulinka)
cayayaan boor noqonin
IVERTEL ma aha in loo isticmaalo mudayo sinta ama xidid.
Avermectins ma laga yaabaa in si fiican loo dulqaatay in dhammaan noocyada aan diirada (xaaladood oo dulqaad natiijada dilaa ah
ayaa lagu soo waramayaa in eeyaha gaar ahaan Collies, Bobtails, Old Ingiriisi Sheepdogs iyo eyda la xiriira ama, iskutallaabtiisana,
iyo sidoo kale in qoolley / tortoises).
Ha isticmaalin in xaaladood oo diidmo lagu yaqaan in ay sinji.
Ha concomitantly ma maamulo la xeryahooda warankiilada leh. Saamaynta of agonister reer Gebacna waa sii korodhay by ivermectin.
Taxadarka GAARKA AH EE ISTICMAALKA
Qiyaaso badan 10ml waa in lagu duraa in laba goobood oo kala duwan si loo yareeyo raaxo ku meel gaar ah ama dareen diidmo goobta la duray.
Waxa aan lagu talinayaa in la maamulo sheyga marka Hypoderma dirxiga lineatum waxaa ku kooban gobolka periaesophagic, ama marka Hypoderma bovis dirxiga ee Xaaladaha kanaalka laf-dhabarka. Raadi tallo aqooneed caafimaadka xoolaha si loo ogaado muddada ugu wanaagsan ee la isticmaalo.
Qiyaasta IYO ROUTE ADMINISTRATION
1 ml 50 kg. miisaanka jidhka, oo u dhiganta 200 mcg / kg ivermectin, iyo 2 mg / kg Closantel.
qaadasho Single of 4.0 mg / kg ivermectin (20 jeer qiyaasta lagula taliyey) maamula subcutant, waxay keeni in ataxia iyo murugada. fiqiira No ayaa loo aqoonsaday. Calaamadaha Waxaa laga yaabaa in faa'iido.
overdosage Calaamadaha Closantel ka mid noqon kara rabitaanka cuntada oo luma, hoos u aragga, saxarada dabacsan iyo inta jeer kor u defaecation. qaadasho sare waxay keeni kartaa indho la'aan, hawo, hyperthermia, tabar guud, inco-duwidda, gariir, tachycardia iyo xad-dhaaf ah dhimashada xaaladaha. Daaweynta overdosage waa astaamaha sida daawo lahayn ayaa loo aqoonsaday.
Hilibka: 35 maalmood.
Lama ogola in loo isticmaalo in lo soo saarka caanaha u wanaagsaneyn isticmaalka bini'aadamka.
Ha isticmaalin in lo'da caanaha laga non-nuujinaya oo ay ku jiraan, kaana uurka leh taas oo loogu talagalay in ay soo saaraan caano
u wanaagsaneyn isticmaalka bini'aadamka 60 maalmood parturition filayaa gudahood.
Ha isticmaalin wax closantel-ka kooban inta lagu jiro mudada 35 maalin ka baxaan.
In 50ml ama dhalada 100ml.
Kaydiyaa meel qabow oo qalalan iyo madow.
Next: duro ivermectin 1%
Ivermectin + Closantel duritaanka